घट्यो बजेटको आकार ! - Kantipath.com
घट्यो बजेटको आकार !
सरकारले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा गर्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको चालू आवको बजेट १३ खर्ब ४४ अर्बमा झारेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल बजेटको ९१.१९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने संशोधित लक्ष्य राखेको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा कार्यक्रममा जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले कोरोनाको कारण यस वर्ष बजेटले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर नहुने संशोधित अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरिएको हो। यस्तै संशोधित राजस्व लक्ष्य १० खर्ब ७४ अर्ब (राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट) संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै सरकारले वैदेशिक अनुदान पनि घटाएर ३५ अर्बमा झारेको छ।
यसबाहेक वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्बमा झारिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको कुल बजेट विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात् २३.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड अर्थात् ११.७ प्रतिशत खर्च गर्ने जनाएको थियो।
बजेटमा अनुमानित खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड व्यहोर्दा ५ खर्ब २४ अर्ब ५० करोड न्यून हुने उल्लेख थियो।
Previous Previous post: हिमपहिरोका कारण भारतमा २६ को मृत्यु, १८० अझै बेपत्ता
Next Next post: इरानमा पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन सुरु